Adiresy: 47890 Città di San Marino, San Marino
Sightseeing: Palace of the House (House of Government), Statue of Liberty, Parva Domus
Rehefa tonga any San Marino ianao , ny kianja Freedom dia ho ny làlambe lehibe indrindra. Io no làlana afovoan'ny renivohitry ny fanjakan'i San Marino ary any andrefan'ny Basilica any Saint Marina . Ireo toerana mahafinaritra sy toerana mahaliana ao San Marino dia miorina akaiky akaiky, noho izany eo amin'ny Kianjan'ny Fahalalahana dia ahitanao ny fananganana ny Lapan'ny vahoaka, ny Statue of Liberty, ny fanorenana an'i Parva Domus.
Ny lapan'ny vahoaka ao San Marino
Ny tranon'ny People's Palace dia toeram-ponenana ho an'ny governemanta sy ny biraon'ny ben'ny tanàna ao an-drenivohitra, misy ny Filankevitra Lehibe, ny filoha lefitra, ny Kongresy ao an-toerana ary ny Filankevitry ny Roambinifololahy. Ny fanorenana ilay malaza Palazzo Publico dia nankinina tamin'ny mpanao mari-trano avy any Italie Francesco Addzurri, ary nandroso nandritra ny folo taona, nanomboka tamin'ny 1884 ka hatramin'ny taona 1894.
Vetivety teo dia nisy ny tranon'ny Great Communes, izay toerana fonenan'ny governemanta tamin'izany fotoana izany. Saingy tamin'ny taona 1996 dia naverina tamin'ny laoniny ilay trano efa tranainy ary ankehitriny dia tena manan-danja. Ny rindrina ivelany dia voaravaka vato sandika, manana sary masina amin'ny olo-masina sy ny fitaovam-piadiana. Ampahany manan-danja amin'ny tranobe dia ny sarivongan'i Md Martin, mpanorina an'i San Marino. Ao amin'ny trano ihany koa ny tilikambo fiambenana, izay misy lakolosy iray antsoina hoe, raha misy loza, fampitandremana ho an'ireo mponina ao an-tanàna.
Ny Efitra Lehibe ao amin'ny Filan-kevitra Foibe dia tokony hanavaka ny toerana misy ny lapa. Azo tratran'ny tohatra tsara tarehy iray izy io. Ny efitrano mahaliana dia ny ivon'ny Filankevitry ny Roambinifololahy sy ny biraon'ny filohan'ny governemanta izay hitondrany ny fandraisana.
Rehefa mandalo ao amin'ny efitra fiambenana ianao, dia hahita ny triptych iray, izay mampiseho ireo olo-masina telo izay mpiaro ny Repoblikana. Ny anarany dia: Marin, Quirin, Agatha.
Raha mankany San Marino ao amin'ny Kianjan'ny Fahalalahana ny voalohan'ny volana Avrily na ny voalohan'ny volana Oktobra, dia afaka mahita lanonana iray mahaliana ianao rehefa nambara ny anaran'ny governemanta vaovao-avy any amin'ny balcony ao afovoan-trano.
Nandritra ny vanim-potoan'ny fizahan-tany teo akaikin'ny lapan'ny tanàna, dia misy koa ny mijery sarimihetsika tsy mahazatra sy marevaka, izay manintona mpizahatany maro - fiovan'ny mpiambina.
Statue of Liberty sy Parva Domus
Ao amin'ny kianja dia misy marika manan-danja iray hafa - ny Statue of Liberty. Mitombo ny fahalianana noho ilay trano. Ny sarivongana dia natolotr'i Otilia Heyrot Wagener tao an-tanàna. Izy io dia noforonina tamin'ny marbra fotsy nataon'ilay mpanao sary sokitra Stefano Galletti ary mampiseho mpiady iray izay mandroso haingana mitondra mitondra afo eny an-tanany. Ny lohan'ity sarivongana ity dia nosatrohana satroboninahitra mahaliana, ny nify ho fampahatsiahivana ireo tilikambo telo ao San Marino. Mahaliana ny mahafantatra fa ny sarin'io sarivongana io dia voasoritra amin'ny vola madinika ao San Marino amin'ny roa santimetatra. Manoro hevitra ireo mpizahatany mba hitahiry vola madinika ho an'ny vintana tsara.
Vantany ao ambadiky ny sarivongan'i Liberty ao am-baravarankely dia sarisary marbra miaraka amin'ny endriky ny rivotra misy rivotra. Ary avy eo amin'ny kianja dia ahitanao ity toetran'i San Marino manaraka ity - fasana fahiny.
Ao amin'ny kianja, mifanohitra amin'ny Palazzo Publico, dia ny tranoben'i Parva Domus (Parva Domus). Amin'izao fotoana izao dia hita eto ny sekreteram-panjakana momba ny raharaha momba ny raharaha ao San Marino, saingy hita ao amin'io trano io voalohany ny 1353, rehefa nisy fivoriana ampahibemaso tany.
Fijerena ny manodidina
Mandeha eo amin'ny Piazza della Liberta ianao, ho hitanao fa mamela làlana madinidinika maro izay hahaliana ny mpizaha tany. Any akaikin'ny kianja dia afaka mahita fivarotana marobe, izay mivarotra karazam-bovoka maro. Azonao atao ihany koa ny mividy entana hoditra sy asa vita amin'ny zavakanto nampiharina. Tahaka ny eny an-kianja, ary eny an-dalambe hafa, maro ny mponina sy mpizaha tany mandehandeha.
Ny fiangonana Gustav Adolf
Diarin'ny zaza - fitsaboana
Ahoana ny fomba hikirakirana ny yarmarks?
Mamonjy amin'ny fahasalamana - fitsaboana tsotra amin'ny gripa
Vehivavy Mpampisint dia vehivavy
Tara-pahatoniana amin'ny fiandohan'ny vohoka
Pork - kaloria
Rano mangatsiaka ao amin'ny akquarium: inona no tokony hatao?
Ny toetra mampiavaka ny toetra
Lanitra "Star Sky"
Nieritreritra an'izany aho - tezitra aho
Ahoana no tokony handraisana antibiotika?
Ny fitsaboana amin'ny alikaola - fanerena sy fampiharana ny fitsaboana aretina samihafa
Vorona ho an'ny fonenana fahavaratra
Ohatrinona ny tazan'ilay zazakely ao anatin'ny iray volana?